Gbasara Anyị-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Ịgbado ọkụ okpu
Eldgbado ọkụ Helter Myọcha
Ikuku okpu okpu ikuku nke ikuku
Ihe anyi bu
Dịka onye ọrụ nyocha, onye nrụpụta na onye nchekwa, Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited Corporation bụ otu n'ime ndị isi na-emepụta okpu agha na China. Anyị na-arụsi ọrụ ike na iwepụta ngwaahịa nchebe anya maka usoro ịgbado ọkụ, gụnyere iko ịgbado ọkụ, okpu mkpuchi ịgbado ọkụ okpu, ikuku iku ume na ikuku.
Site na nyocha sayensị dị elu, imepụta na ngwaọrụ nnwale, ụlọ ọrụ anyị bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na-amụ ma na-emepụta ngwaahịa ndị dị mkpa na mba anyị. Anyị na-ekwusi ike na nchọpụta sayensị na teknụzụ na nyocha nke onwe na mmepe. 20% nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ anyị bụ ndị ọrụ nka, nke bụ ndị otu ọrụ iji na-anya isi. Ngwaahịa anyị erutela ọkwa mba ụwa.
Companylọ ọrụ anyị na-eleba anya na mmepụta na-aga n'ihu na ndị ahịa iji nweta mmeri mmeri. Anyị ga-eji obi eziokwu na ịnụ ọkụ n'obi nweta ngwaahịa na ọrụ dị elu.
Meta mkpuchi ọkụ MX-9 na mgbanye ọkụ
Ntụkwasị obi gị bụ ikike ịnya ụgbọ ala anyị kachasị maka ọganihu, biko tụkwasara anyị pasent 100.
Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd., nke dị na Nantong City, Jiangsu Province, bụ ụlọ ọrụ sayensị-teknụzụ, nke kachasị na mmepe, na-emepụta ma na-ere ngwaahịa elektrọnik. Ihe ndi ozo: ihe nkpuchi igwe ndi mmadu nke ihe ndi ozo.
Ntọala na 2012
Ndị erughị 5
0% Nzaghachi ngwa ngwa
3000 - 5000 square
nwebisiinka © Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd. Nka na ụzụ site MEEALL